Ny famoahana ny lithium dia matotra amin'ny fiaraha-monina | Martech Zone
Ny famoahana ny lithium dia matotra amin'ny fiaraha-monina
Alatsinainy, Septambra 9, 2013 Talata, Septambra 10, 2013 Douglas Karr
Lithium dia nandefa andiana horonan-tsary mahatsikaiky sy microsite vaovao, Miezaha ho matotra momba ny fiaraha-monina hitrandraka fahafinaretana vitsivitsy amin'ny Social Media ary hanome whitepapers fampahalalana vitsivitsy hanampiana ireo orinasa amin'ny paikadin'ny media sosialy. Ao koa ny a fanombantombanan-tena. Ahitana ireto:
Customer Serivisy sy haino aman-jery sosialy
Inona Ny tiany dia misy ifandraisany amin'ny valin'ny orinasa
ary Lithium dia mampiditra saka… Mba hanesoana ireo orinasa mampiasa saka
Tena nampiasa saka ve ny Lithium mba hanesoana ireo orinasa manaparitaka paikady media sosialy amin'ny saka?
Amin'ny lafiny kely… Mihevitra aho fa niara-niasa tamina tarehin-tsoratra marobe tamin'ireto horonantsary ireto.
Tags: matotramahazo horonan-tsary matotraLithium
Everypost: Fampiasa finday iray hamoahana na aiza na aiza